“Hapana Mumwe Munhu Akambotaura Saizvozvi” — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
cf chits. 11 pp. 108-117
Kutaura Zviri Nyore
Kubvunza Mibvunzo Yakakodzera
Kutaura Zvine Musoro
“Hapana Mumwe Munhu Akambotaura Zvakafanana Neizvi”
Tevedzera Mudzidzisi Mukuru
1, 2. (a) Nei vakuru vakuru vakatumwa kunosunga Jesu vakadzoka vari maoko chete? (b) Nei Jesu akanga ari mudzidzisi anoshamisa?
VAFARISI vakafufutirwa nehasha. Jesu ari mutemberi, achidzidzisa nezvaBaba vake. Vaya vakateerera havasi kubvumirana; vakawanda vanotenda muna Jesu, asi vamwe vanoda kuti asungwe. Vasingakwanisi kudzora hasha dzavo, vatungamiriri vezvitendero vanotumira vakuru vakuru kuti vanosunga Jesu. Zvisinei, vakuru vakuru vacho vanodzoka vari maoko chete. Vapristi vakuru nevaFarisi vanoda kutsanangurirwa: “Nei musina kuuya naye?” Vakuru vakuru vacho vanopindura kuti: “Hapana mumwe munhu akambotaura saizvozvi.” Vakashamiswa kwazvo nokudzidzisa kwaJesu zvokuti vanonzwa vasingadi kumusunga.*—Johani 7:45, 46.
2 Vakuru vakuru ivavo handivo voga chete vakashamiswa nokudzidzisa kwaJesu. Vanhu vaiungana vakawanda kuti vangomunzwa achidzidzisa. (Mako 3:7, 9; 4:1; Ruka 5:1-3) Nei Jesu aiva mudzidzisi anoshamisa kudaro? Sezvatakaona muChitsauko 8, aida chokwadi chaaitaura, uye aida vanhu vaaidzidzisa. Aivawo nyanzvi pakushandisa nzira dzokudzidzisa. Panzira dzinobudirira dzaakashandisa, ngatikurukurei nhatu toona kuti tingadzitevedzera sei.
3, 4. (a) Jesu aishandisirei mutauro uri nyore pakudzidzisa kwake? (b) Mharidzo yepaGomo yaiva muenzaniso wokudzidzisa kwaJesu kuri nyore sei?
3 Ungafungidzira here kuwanda kwemashoko aigona kudai akashandiswa naJesu? Asi paaidzidzisa, haana kumbotaura zvinhu zvainge zvakaomera vateereri vake kunzwisisa, vakawanda vavo “vakanga vari vanhuwo zvavo, vasina kudzidza.” (Mabasa 4:13) Aiva nehanya nezvavakanga vasingagoni kuita, asingambovaremedzi nemashoko akawandisa. (Johani 16:12) Mashoko ake aiva nyore, asi chokwadi chaaibudisa chaikosha zvikuru.
4 Somuenzaniso, funga nezveMharidzo yepaGomo iri pana Mateu 5:3–7:27. Mumharidzo iyi, Jesu akapa mazano anoita kuti vanhu vafunge, anosvika pamudzi chaipo penyaya. Hamuna pfungwa kana kuti mashoko akaoma. Chokwadi, haamboshandisi mashoko akaoma kunzwisiswa kunyange nomwana muduku! Saka hazvishamisi kuti Jesu paakapedza, mapoka evanhu—zvichida aisanganisira varimi vakawanda, vafudzi, uye vabati vehove—“akashamiswa nemadzidzisiro ake.”—Mateu 7:28.
5. Ipa mienzaniso yemashoko akataurwa naJesu akanga ari nyore asi aine zvaanoreva zvinokosha.
5 Paaidzidzisa, Jesu aiwanzoshandisa zvirevo zvipfupi zviri nyore kunzwisisa uye aitaura mashoko aiva nezvaanoreva zvinokosha. Saka akaita kuti shoko rake ridzike midzi mumwoyo nomupfungwa dzevateereri vake, zvokuti vaisazombozvikanganwa, panguva yakwakanga kusati kwava nemabhuku akadhindwa. Chimbofunga mimwe mienzaniso: “Regai kutonga kuti murege kutongwawo.” “Vanhu vakagwinya havadi chiremba, asi vanorwara vanomuda.” “Mudzimu unoda, asi nyama haina simba.” “Dzorerai zvinhu zvaKesari kuna Kesari, asi zvinhu zvaMwari kuna Mwari.” “Kupa kune mufaro mukuru kupfuura kugamuchira.”* (Mateu 7:1; 9:12; 26:41; Mako 12:17; Mabasa 20:35) Pava neanoda kusvika makore 2 000 kubva pakatanga kutaurwa mashoko aya, asi haakanganwiki.
6, 7. (a) Kuti tidzidzise zviri nyore, nei zvichikosha kuti tishandise mutauro uri nyore? (b) Tingarega sei kuremedza mudzidzi weBhaibheri nemashoko akawandisa?
6 Tingadzidzisa sei zviri nyore? Chinhu chinodiwa chinokosha ndechokuti tishandise mutauro uri nyore unogona kunzwisiswa nyore nyore nevanhu vakawanda. Chokwadi chinokosha cheShoko raMwari hachina kuoma. Jehovha akazivisa zvinangwa zvake vaya vane mwoyo yakatendeseka uye vanozvininipisa. (1 VaKorinde 1:26-28) Mashoko ari nyore akanyatsosarudzwa anganyatsobudisa chokwadi cheShoko raMwari.
Paunenge uchidzidzisa, taura zviri nyore
7 Kuti tidzidzise zviri nyore, tinofanira kungwarira kuti tisaremedza mudzidzi weBhaibheri nemashoko akawandisa. Saka patinenge tichidzidza Bhaibheri nomumwe munhu, hatifaniri hedu kutsanangura zvose zvose; uyewo hatifaniri kudzidza nechimbi-chimbi sokunge kuti kudzidza mapeji akawanda ndiko chinhu chinonyanya kukosha. Pane kudaro, kuchenjera kuona mashoko amunofanira kudzidza maererano nezvinodiwa nomudzidzi uye mano ake. Chinangwa chedu ndechokubatsira mudzidzi wacho kuti ave muteveri waKristu uye munamati waJehovha. Tiine chinangwa ichocho, tinofanira kushandisa chero nguva ingadiwa kuti tibatsire mudzidzi anofarira kunyatsonzwisisa zvaanenge ari kudzidza. Chokwadi cheBhaibheri chichazosvika pamwoyo pake chomuita kuti ashandise zvaanenge achidzidza kana tikadaro.—VaRoma 12:2.
8, 9. (a) Nei Jesu aibvunza mibvunzo? (b) Jesu akashandisa sei mibvunzo kuti abatsire Petro kuwana mhinduro yakarurama panyaya yokubhadhara mutero wetemberi?
8 Jesu aishandisa mibvunzo zvakanaka chaizvo, kunyange pazvingadai zvaitora nguva shomanana kungoudza vateereri vake pfungwa yacho. Saka aibvunzirei mibvunzo? Dzimwe nguva, aishandisa mibvunzo inobatsira kufunga kuti afumure zvaivavarirwa nevanhu vaimushora, nokudaro achivashayisa zvokutaura. (Mateu 21:23-27; 22:41-46) Zvisinei, kakawanda aimbobvunza mibvunzo kuitira kuti vadzidzi vake vataure zvaiva mupfungwa dzavo uye kuti akurudzire uye arovedze mafungiro avo. Saka aibvunza mibvunzo yakadai sokuti, “Munofungei?” uye “Unotenda izvi here?” (Mateu 18:12; Johani 11:26) Nemibvunzo yake, Jesu akasvika uye akabaya mwoyo yevadzidzi vake. Funga nezvomuenzaniso uyu.
9 Pane imwe nguva, vateresi vakabvunza Petro kana Jesu aibhadhara mutero wetemberi.* Petro akapindura pakarepo kuti, “Hungu.” Gare gare, Jesu akati kwaari: “Simoni, unofungei? Madzimambo enyika anogamuchira miripo kana mutero womunhu wose kubva kuna vanaani? Kubva kuvanakomana vavo here kana kuvamwe vanhuwo zvavo?” Petro akapindura achiti: “Kuvamwe vanhuwo zvavo.” Jesu akati: “Saka, vanakomana havateri.” (Mateu 17:24-27) Hapana mubvunzo kuti Petro akajekerwa nemibvunzo yacho, nokuti zvaizivikanwa kuti nhengo dzemhuri yemadzimambo dzainge dzisingateri. Naizvozvo, soMwanakomana akaberekwa ari mumwe oga waMambo wokudenga ainamatwa patemberi, Jesu akanga asingasungirwi kubhadhara mutero. Ona kuti pane kungoudza Petro mhinduro yakarurama, Jesu nounyanzvi akashandisa mibvunzo kuti abatsire Petro kuwana mhinduro yakarurama uye zvichida kuti aone kuti munguva yemberi zvakanaka kunyatsofunga asati apindura.
Bvunza mibvunzo inoenderana nezvinofarirwa nasaimba
10. Tingashandisa sei mibvunzo zvinobudirira patinenge tichiparidzira paimba neimba?
10 Tingashandisa sei mibvunzo zvinobudirira muushumiri hwedu? Patinenge tichiparidzira paimba neimba, tinogona kushandisa mibvunzo kuita kuti saimba afarire, zvichida tichizarura nzira yokuti tikurukure naye mashoko akanaka. Somuenzaniso, kana munhu mukuru akauya pasuo, tingamubvunza noruremekedzo kuti, “Nyika yachinja zvakadini muupenyu hwenyu?” Apindura, tingazobvunza kuti, “Munofunga kuti chii chingadiwa kuita kuti nyika ino ive nzvimbo iri nani yokugara?” (Mateu 6:9, 10) Kana amai vane vana vaduku vakauya pasuo, tinogona kubvunza kuti, “Makambofunga here kuti nyika ino ichange yaita sei vana venyu pavachazokura?” (Pisarema 37:10, 11) Tikava vanocherechedza patinosvika pamba, tingakwanisa kusarudza mubvunzo unoenderana nezvinofarirwa nasaimba.
11. Tingashandisa sei mibvunzo zvinobudirira patinenge tichidzidza Bhaibheri nomunhu?
11 Tingashandisa sei mibvunzo zvinobudirira patinenge tichidzidza Bhaibheri nomunhu? Mibvunzo yakanyatsosarudzwa inogona kutibatsira kuti tiite kuti mudzidzi ataure zviri pamwoyo pake. (Zvirevo 20:5) Somuenzaniso, ngatitii tiri kudzidza chitsauko chinoti “Kurarama Nenzira Inofadza Mwari” mubhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?* Chitsauko chacho chinotaura maonero anoita Mwari nyaya dzakadai sounzenza, udhakwa, uye kureva nhema. Mhinduro dzomudzidzi wacho dzingaratidza kuti anonzwisisa kuti Bhaibheri rinodzidzisa chii, asi anobvumirana nezvaari kudzidza here? Tingabvunza kuti, “Maonero anoita Mwari nyaya dzakadaro ane musoro here kwamuri?” Tingabvunzawo kuti, “Mungashandisa sei mashoko aya muupenyu hwenyu?” Zvisinei, yeuka kuti unofanira kungwarira, uchiremekedza mudzidzi wacho. Hatimbodi kubvunza mibvunzo isina nebasa rose ingamunyadzisa.—Zvirevo 12:18.
12-14. (a) Jesu akashandisa sei mano ake kubatsira vanhu kufunga zvine musoro? (b) Kufungai kune musoro kwakashandiswa naJesu vaFarisi pavakati simba rake raibva kuna Satani?
12 Sezvo aiva nepfungwa dzakakwana, Jesu aiva nyanzvi yokubatsira vamwe kufunga. Dzimwe nguva, aitaura zvine musoro kuti arambe kupomerwa kwaaiitwa nevaimushora. Kakawanda, ainyengetedza kuti adzidzise vateveri vake zvidzidzo zvinokosha. Ngationei mimwe mienzaniso.
13 Pashure pokunge Jesu aporesa murume aiva nedhimoni aiva bofu uye ari chimumumu, vaFarisi vakamupomera vachiti: “Munhu uyu hapana chimwe chaanoshandisa kudzinga madhimoni kunze kwaBherizebhubhu [Satani], mutongi wemadhimoni.” Vakabvuma kuti zvaida simba rinopfuura romunhu kudzinga madhimoni. Zvisinei, vakati simba raJesu raibva kuna Satani. Zvavaipomera zvaisangova zvenhema chete asiwo zvakanga zvisina musoro. Achifumura mafungiro avo akanga akaipa, Jesu akapindura achiti: “Umambo hwose hwakapesana hunoparara, uye guta rose kana imba yakapesana haizomiri. Saizvozvowo, kana Satani achidzinga Satani, iye apesana pachake; saka, umambo hwake huchamira sei?” (Mateu 12:22-26) Chaizvoizvo, Jesu akanga ari kuti: “Kudai ndanga ndiri mumiririri waSatani, ndichikoromora zvakaitwa naSatani, ipapo Satani aizenge achizvirwisa uye pasina nguva aizoparara.” Vaigona sei kuramba kutsanangura zvine musoro kwaainge aita?
14 Jesu akanga asati apedza kutaura navo. Achiziva kuti vamwe vevadzidzi vevaFarisi vakanga vadzinga madhimoni, akabvunza mubvunzo uri nyore asi uine simba, wokuti: “Kana ndichidzinga madhimoni ndichishandisa Bherizebhubhu, vanakomana venyu [kana kuti, vadzidzi] vanoadzinga vachishandisa ani?” (Mateu 12:27) Pfungwa yaitaurwa naJesu yaiva iyi: “Kana ini ndichidzinga madhimoni nesimba raSatani, saka vadzidzi venyu vanofanira kunge vachishandisawo simba iri.” VaFarisi vaigona kuti chii? Vaisazombobvuma kuti vadzidzi vavo vaishandisa simba raSatani. Saka Jesu akashandisa mafungiro avo akanga asina kunaka kuti vasvike pamhedziso yavakanga vasingadi. Hazvikurudziri here kungoverenga kuti Jesu akavabatsira sei kufunga? Zvisinei, fungidzira mapoka evanhu akazvinzwira Jesu achitaura, nokuti hapana mubvunzo kuti kuvapo kwake uye matauriro ake zvakawedzera simba remashoko ake.
15-17. Rondedzera muenzaniso wemashandisiro akaita Jesu kutaura kwokuti “zvikuru sei” kuti adzidzise chokwadi chinonyevenutsa mwoyo pamusoro paBaba vake.
15 Jesu akashandisawo kufunga kune musoro, kwokunyengetedza kuti adzidzise chokwadi chinokurudzira, uye chinonyevenutsa mwoyo nezvaBaba vake. Aiwanzoita izvozvo achishandisa kutaura kwokuti “zvikuru sei”—kubatsira vateereri vake kuti vabve pachokwadi chavakajaira vachienda kune chakatosimba zvikuru. Kana achiratidza kusiyana, matauriro aya anogona kubatsira zvikuru. Ngatimboongororei mienzaniso miviri chete.
16 Paaipindura zvakanga zvakumbirwa nevadzidzi vake kuti avadzidzise kunyengetera, Jesu akarondedzera kuda kunoita vabereki vasina kukwana ‘kupa vana vavo zvipo zvakanaka.’ Akabva agumisa achiti: “Kana imi muchiziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka, kunyange zvazvo makaipa, Baba vari kudenga vachapa vaya vanovakumbira mudzimu mutsvene zvikuru sei!” (Ruka 11:1-13) Zvakataurwa naJesu zvinoratidza kusiyana kwacho. Kana vabereki vanoita zvivi vachitarisira zvinodiwa nevana vavo, Baba vedu vari kudenga, vakakwana uye vakarurama munzira dzose vachapa zvikuru sei mudzimu mutsvene kuvanamati vavo vakavimbika vanonyengetera kwavari vachizvininipisa!
17 Jesu akashandisa kufunga kwakadaro paaipa zano rokuchenjera rine chokuita nokuzvidya mwoyo. Akati: “Makunguo haadyari mbeu kana kukohwa, uye haana tsapi kana dura, asi Mwari anoapa zvokudya. Imi munokosha zvikuru sei kupfuura shiri? Nyatsocherechedzai kukura kunoita maruva; haashandi kana kuruka . . . Zvino, kana Mwari achipfekedza saizvozvo zvinomera zviri musango zviripo nhasi asi mangwana zvokandwa muchoto, angatokupfekedzai zvikuru sei, imi vane kutenda kuduku!” (Ruka 12:24, 27, 28) Kana Jehovha achitarisira shiri nemaruva, achatarisira zvikuru sei vanhu vanomuda uye vanomunamata! Nokutaura kwakadai, Jesu zvechokwadi akasvika pamwoyo yevateereri vake.
18, 19. Tingakurukura sei nomunhu anoti haatendi muna Mwari waasingaoni?
18 Muushumiri hwedu, tinoda kushandisa kufunga zvine musoro kuti tirambe zvinhu zvenhema zvinotendwa. Tinodawo kunyengetedza kuti tidzidzise chokwadi chinokurudzira pamusoro paJehovha. (Mabasa 19:8; 28:23, 24) Tinofanira kudzidza kutaura zvinhu zvakaoma kunzwisisa here? Aiwa. Tinodzidza pana Jesu kuti mashoko ane musoro anotaurwa zviri nyore anobatsira zvikuru.
19 Somuenzaniso, tingapindura sei kana mumwe munhu akati haatendi muna Mwari waasingaoni? Tinogona kumubatsira kuti afunge kuti hapana chinovapo pasina chinenge chachikonzera. Patinoona chimwe chinhu, tinoziva kuti panofanira kuva nechakachikonzera. Tingati: “Kudai waiva mune imwe nzvimbo isingagari vanhu, wobva waona imba yakavakwa zvakanaka yakazara nezvokudya (zvinhu zviripo), waisazobva wangobvuma here kuti pane mumwe munhu akavaka (akakonzera) imba iyoyo? Saizvozvowo, patinoona zvinhu zvakarongeka zvakasikwa uye zvokudya zvakawanda zviri ‘mumatura’ (zvinhu zviripo) enyika, hazvina musoro here kugumisa kuti pane mumwe Munhu (Akakonzera) akazviita? Bhaibheri pacharo rinoti: ‘Imba imwe neimwe inovakwa nomumwe munhu, asi iye akavaka zvinhu zvose ndiMwari.’” (VaHebheru 3:4) Chokwadi, hazvinei kuti zvatinotaura zvingava zvakanaka sei, haasi munhu wose achagutsikana.—2 VaTesaronika 3:2.
Shandisa zvikonzero zvinosvika pamwoyo womunhu wacho
20, 21. (a) Tingashandisa sei kutaura kwokuti “zvikuru sei” kuti tiratidze unhu hwaJehovha uye nzira dzake? (b) Tichakurukurei muchitsauko chinotevera?
20 Pakudzidzisa kwedu, mungava muushumiri hwomumunda kana kuti muungano, tinogonawo kushandisa kutaura kwokuti ‘zvikuru sei’ kuti tiratidze unhu hwaJehovha uye nzira dzake. Somuenzaniso, kuti tiratidze kuti dzidziso yokutambudzwa nokusingagumi mumoto wehero chaizvoizvo haifadzi Jehovha, tingati: “Ndibaba vapi vane rudo vangaranga mwana wavo nokupisa ruoko rwomwana wavo mumoto? Pfungwa iyoyo yomoto wehero inofanira kuva inosemesa zvikuru sei Baba vedu vokudenga vane rudo!” (Jeremiya 7:31) Kuti tivimbise munhu watinonamata naye akaora mwoyo nezvokuti Jehovha anomuda, tingati: “Kana Jehovha achikoshesa kunyange kashiri kadukuduku, anofanira kuva nehanya uye kuva norudo zvikuru sei nomumwe nomumwe wevanamati vake vepasi pano, kusanganisira imi!” (Mateu 10:29-31) Kutaura kwakadaro kungatibatsira kusvika pamwoyo yevamwe.
21 Pashure pokunge taongorora nzira nhatu chete dzokudzidzisa dzakashandiswa naJesu, zviri nyore kuti tione kuti vakuru vakuru vaya vakatadza kumusunga vakanga vasingawedzeredzi pavakati: “Hapana mumwe munhu akambotaura saizvozvi.” Muchitsauko chinotevera, tichakurukura nzira yaJesu yokudzidzisa zvichida yaanonyanya kuzivikanwa nayo, iya yokushandisa mifananidzo.
Vakuru vakuru vacho vangangova vaishandira dare reSanihedrini vachitungamirirwa nevapristi vakuru.
Aya mashoko okupedzisira, ari pana Mabasa 20:35, anongotaurwa nomuapostora Pauro chete. Angave akaanzwa achitaurwa (zvichida nomumwe munhu akanzwa Jesu achiataura kana kuti naJesu akamutswa) kana kuti akaaziviswa naMwari.
VaJudha vainzi vabhadhare mutero wegore negore wetemberi wemadhirakema maviri, unenge waiva mubhadharo wemazuva maviri. Rimwe bhuku rinoti: “Mutero uyu wainyanya kushandiswa pakubatsira kubhadhara zvinopiwa zvinopiswa zvezuva nezuva uye zvibayiro zvose zvaipiwa kuti vanhu vabatsirwe.”
Rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Ungatevera Jesu Sei?
Zvakataurwa naJesu zvingakubatsira sei kusarudza mashoko ako paunenge uchipa hurukuro muungano?—Mateu 11:25.
Vanokurukurira voruzhinji vangatevedzera sei kushandisa kwaiita Jesu mubvunzo wakadai?—Mateu 11:7-9.
Ungashandisa sei nokuchenjera gudziramukanwa pakudzidzisa kwaunoita?—Mateu 7:3; 19:24.
SaJesu, tingashandisa sei mienzaniso inooneka pakudzidzisa vamwe?—Johani 13:5, 14.